Hiran State - News: wararkii ugu danbeyey siyaasada Somaliya loolanka R/wasaraha cusub, mustaqbalka labada Shariif iyo Doorashada lagu wado iney wadanka ka dhacdo qaabka ay u dhaceyso.
wararkii ugu danbeyey siyaasada Somaliya loolanka R/wasaraha cusub, mustaqbalka labada Shariif iyo Doorashada lagu wado iney wadanka ka dhacdo qaabka ay u dhaceyso.
Som:-waqtiyadii hore Somalidu waxey aheyd shacab u qeybsanaa in loo taliyo in talisa maanta siyaasadii Somaliya waxey noqotay mid meelkasta iska taalo hadey noqon laheyd hogaanka sare amaba sirta wadanka waaba hadii ay maanta jirto inuuba wadanku leeyahay sir laga qarinayo aduunka intiisa kale.
Mudo 21 sano ah waxaa siyaabo kala duwan maalinba maalinta ka danbeysay loo ugaarsanayey waxgaradka, aqoonyahanada, culimaa'udiinka iyo waliba saraakiisha ciidanka. Sidoo kale waxaa dalka ka dhacay dagaalo jahli ah oo u dhaxeeyey amaba ilaa maanta u dhaxeeya qabiilada Somaliyeed qaarkood. sidoo kale waxii ka danbeyey 1994 Somaliya ma aheyn dal iskiis ay dadkiisu u heshiin karaan waxaa ku milmay wadamo dano fog ka leh wadanka kuwaasi oo iyaguna isticmaalayo muwaadiniin Somaliyeed oo halkii ay caruurtooda mustaqbalka geysan lahayeen amaba wadankii ay ka soo jeedeen loo adeegsanayo iney deb qabadsiiyaan iyagoo u xilanayo waxoogaa dhaqaalo ah.
Wadamada Somaliya ay ka tagi weysay mudadaasi aanu kor ku soo sheegnay ilaa manta maalinba maalinta ka danbeysa waxey keenaan amaba soo abaabulaan kooxo magac u yaal ah laakinse lagu dhibaateeyo shacabka iyo jiritaanka dalka. sidoo kale waxaa la aabulay hogaamiye kooxyeedyo saldhigoodu ahaa Mogdisho oo iyagu markaasi sameystay ciidamo beeleed ka yimid amaba laga soo aruuriyey hadba qabiilka uu markaasi ka soo jeedo qabqablaha iyaga hogaaminaya.
Sidoo kale waxaa wadamada dhibta ku haya Somaliya bar bar socda mashaariic ay malaayiin dolar ku helaan hay'ddo UNka hoos taga iyo kuwo NGO ahoo saldhigoodu yahaya Kenya oo dhamaantood ay noloshoodu ku xiran tahay qalalaasaha Somaliya iyagoo ka faa'ideysanaya dagaalada wadanka ka jira ayey iyaguna waxey si uu mashruucoodu u hirgalo isticmaalaan Somali ay ku sheegeen iney yahiin turjubaano kuwaasi oo ay dhac dhac siiyaan. shaqada Somalidaasi waxey tahay in ay mediyaha Somalida ku soo qoraan in wadanka mashaariic laga fuliyey iyagoo isticmaalaya hadba idaacada amaba webka ugu afka dheer ee markaasi jira xiligaasi ay doonayaan iney fikirkooda gadaan.
Intaasi waxaa dheer Somaliya waxuu ahaa wadan hadii ay dadkoodu is dagalaan si sahlan u xalisan jiray colaadaasi iyagoo geed hoostiisa ku garami jiray dagaalku diba ha u soo cusboonaadee mudo ayaa la kala joogi jiray hayeeshee waxey talo faraha ka baxday markii maalin cad uu madaxweynaha hada talada haya Shiikh Shariif uu aduunyada ugu yeertay kooxo jihaad doon ah oo ay ku jiraan alqacida oo dhamantood denbiyo ka soo galay wadamadii ay u dhasheen. kedibna maxaa dhacay in hal maalin shacabkii loo isticmaalo qaraxyo is xig xiga iyadoo mudo cayiman ay ku naf waayeen kumanaan Somaliya ah maadama halkii mar 40 qofood ilaa 100 qofood hal goob lagu qarxinayo.
Taariikhdu waa maguuraan madaxweyne Shariifne taariikhdaasi wey sugeysaa ama doorasho iney wadanka ka dhacdo ha diido ama ha iska dhaafo waqti yar ayaa u haray inta uu xabsi ka gali doono. sidoo kale waxaa taasi bar bar socda siyaasadaha gunimada xambaarsan ee uu ku dhaqmo gudoomiyaha baarlamaanka aduunyada hadey hal mar kuu marto oo ay mar labaad kuu marto leyskama soo taagnaado waa laga tagaa meesha si waxii siyasada kaa soo galay ee dhaqaalo ahaa aad ugu hesho meel nabad ah oo aad ku cunto, markaad eegto siyaasada gudoomiyaha baarlamaanka oo horey ugu guuleystay iney u nacamleeyaan qab qablayaashii dagaalka kuna fushada siyaasad kasta oo uu doonayo iney kaka fusho koofurta Somaliya hada wuu ka dalacay arintaasi waxuuna u gudbay inuu maamulo hogaamiyaasha maamul gobolka kaliya ee si rasmi ah ugu shaqeeya Somaliya waa Puntlane.
Madaxweyne Faroole oo ku xirtay gudoomiyaha baarlamaanka isna lahaa waa Asharaafe ku daneyso dhawr shir oo caalami ah ayaa laga qeyb galiyey inta lagala hadley Mahiga ujeedadii laga lahaane wax yar mahane inta badan waa laga gaaray arintaasina qoraal kale ayaanu qaabkey u dhacday uga hadli doonaa mar kale.
Yaa isku heysta in la soo magacaabo R/wasaare cusub?
R/wasaaraha maqaarsaar ka ah ee ay hada sugayaan Mahiga iyo m/weynaha Ugandha xukumadiisa waxaa loogu yeeri doonaa xukumadii Kampala waxaana hada isku heysta laba kooxood sida.
1- Madaxweynaha jabouti, madaxweyne Shariif iyo R/wasaarahii shaqada laga ceyriyey maalintii shaleyto Famraajo waxey doonayaan inuu booskaasi buuxiyo wasiirkii hore ee qorsheynta ninka hada xilka si kumeel gaar ah u haya.
2- Kooxda kale waa Ethiopia, Puntland lama dhihi karee Faroole. gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha Ugandha oo maanta kusoo biiray waxey doonayaan in xilkaasi loo magacaabo nin jooga Ethiopia oo la yiraahdo Mohamed Ali Muud.
Hadaba hadii uu yimaado R/wasaaraha ay wataan kooxda labaad madaxweyne Shariif waxuu xilkiisa ku weynayaa mudo 30 maalmood ah qorshahaasina waa gabo gabo. hadiise uu yimaado midka 1aad isaguna Farmaajo ayuuba ka sii xukun jecel yahay ma dhici doonto lamana arki doono Somaliya oo ay doorasho ka dhacdo waxana kooxda 1aad miiska u saaran sidii gudoomiyaha baarlamanka looga taqalusin lahaa si ay meel cidla ah u soo istaagaan Faroole iyo kooxdii Shariif Sakiin daacada u ahaa.
Halkaasi waxaa ka cad walito ma jirto qaab shacabka dhiban lagu bad baadin karo loolanka hada jiro waa mid ku qotoma dano shaqsiyadeed madaxweyne ilaa gudoomiye baarlamaan. Somaliya waxaa maanta meel uga dhacay mudane baarlaman oo aan ilko uu wax ku qaniino heysan shaqadiisuna tahay markii Shariif Sakiin kuu yeero soo xaadir markii uu baarlamanka xirane meelaha maqaayadaha Mogdisho ka dhaha goormuu afhayeenkii imanayaa iyo wax la mid ah.
Yaa hor taagan iney wadanka doorasho ka dhacdo.
Wadanka iney doorasho ka dhacdo waxaa hor taagan wadamo dhawr ah oo malaayiin dolar ku qaata dagaalada ka socda dalka iyagoo leh waxaanu la dirireynaa argagixsada Soamliya halka kuwane leeyahiin waxaanu nahay nabad ilaaliyaal African ah waxana waardiyo ka nahay hogamiyaasha Somaliya.dhamaantood waxa malaayiinta dolar lagu dul sameynayo waa dhiiga shacbaka ee daadanaya iyo damiir la,aanta hogaanka maanta jira oo loo tilmaamayo sidii ay u noolaan lahaayeen iyaga iyo shacabka ay metelaan.arinta anu qoraal dheer ka soo diyaarin doono waa in hada laga shirayo qaabka ugu haboon ee shir wadatashi ah loogu qaban karo wadan aan SOmaliya aheyn iyadoo hada la kala dooranayo Ugandha amaba Kenya midkii macquulsan, halka masuuliyiinta Somaliya lagu mashquuliyey howl aan dhaafsiisneyn 4KM Mogdisho ka tirsan.
Ugu danbeyn siyaasada labada Shariif waxey ku danbeyn doontaa meel aysan dad badan qiyaasi karin waayo hooyada iyo caruurta maalin iyo habeen silaca u dhimanayo oo ay korkooda isku heystaan inta ay caruurtoodii wadanka kala baxeen xisaabtan ayaa ka danbeyn doonta. guuldarada labada Shariif ku dhici doonta oo ay ka qoomameyn doonaa waxey noqon doontaa marka ay ku fikiraan iney sii joogi doonaan iyagoo iska indha tirayo qatarta uu wadanku ku jiro iyo xiliga kumeel gaarka ah dhibaatada laga dhaxli doono oo iyaga saameyn doonto inta aanba la gaarin shacabka Somaliyeed ee dhiban, hadii ay wadanka si deg deg ah uga saari waayaan nidaamka TFGda.
Waliba labadooda wey sii kala darnaan doonaan oo shaqsiga riyada ku jira waa madaxweynaha haduusan ogolaan iney Somaliya ka baxdo xiliga kumeel gaarka ah, halkii uu isku mashquulin lahaa in uu hal sano sii joogo.waliba madaxweyne Shariif wuu ogyahay in wadamo badan sirdoonkoodu ku sugan yahay Somaliya amaba Mogdisho oo ay xitaa qalab divice ah oo sirtooda iyo dhaqaaqooda lagula soconaa Villa Somalia dhinac laga saartay, wuuna ogyahay madaxweynuhu inuusan xakumin Somaliya oo dhan oo lagu madadaalinayo dhawr KM oo kaliya si wadanka intiisa kale ay u maamushaan dalalka ku shaqeysanayo hogaamiyaasha Somaliya.
La soc wararkeena danbe iyo labada Shariif iyo qaabka ay siyaasada Somaliya kaka bixi doonaan.
· admin on June 20 2011 14:45:25 · 0 Comments · 2339 Reads ·
14,633,860 unique visits